Afaka mahazo lamosina avo lenta ve aho?
Androany dia mety ho mampatahotra ny SEOs sy mpandraharaha amin'ny tranokala matihanina amin'ny resaka fifanakalozan-kevitra mahazatra momba ny "backlinks quality" sy ny fividianana fikarohana. Nahoana? Satria matetika loatra ny tetikasa hikolokolo ny lozam-pampandrosoana PR tsy misy manimba ny vohikala na ny bilaogy dia asa tena sarotra. Ny ankamaroany, ny tanjon'ny SEO dia ny hampitombo ny tahan'ny CTR, ny fanamafisana ny fifamoivoizana, ary koa ny fampivoarana ny tranonkala. Ary raha te-hahazo ny rindran-kira ambony amin'ny orinasa fivarotana rohy ianao - dia maro ireo manampahefana manosika ny "tolotr'izy ireo" manerana ny tranonkala - fa ny zava-misy sasany mangatsiaka momba ny fananganana rohy amin'ny antsinjarany. Ny zavatra dia mety ahitan'i Google tsindraindray ny asa mampiahiahy mitranga amin'ny tranokalanao na blôginao (i. f. , fampiroboroboana goavam-be amin'ny vidiny ambany, amin'ny fampiasana vatofantsika miafina, votoatin'ny spammy, ary fitaovana hafa na tranga hafa amin'ny badass Black-Hat sy Grey-Hat SEO). Raha jerena ny tranga ratsy indrindra rehefa maharay fiverenana ambony PR ianao amin'ny mpamatsy ratsy vazivazy (i. f. , lisitra ambany kalitao, famandrihan-tseraseran'ny forum, fambolena fikambanana ary kodiarana mifamaly - a. K. ny. fifanakalozan-tserasera) - ny zava-drehetra dia mety hiafara amin'ny fandringanana. Midika fa ny tranonkalanao dia mety ho voarara amin'ny fikarohana an-tserasera indray mandeha na ho mandrakizay. Noho izany, raha raisina ho toy izany ny mety hitranga henjana toy izany, dia tokony ho fantatrao ny momba ny karama fialan-tsasatra, ny karazana sazy mihetsika be indrindra ary ny fomba hisorohana azy ireo tsara indrindra, farafaharatsiny.
Ny karazana laharana famaizana
Alohan'ny zavatra hafa, avelao atrehina izany - sazy sasantsasany mety hanimba ny ampahany amin'ny tranonkalanao, ary ny sisa Matetika izy ireo no miorina eo amin'ny fototry ny tranonkala. Raha jerena ny fanitsakitsahana ankapobeny amin'ny fividianana na fivarotana rindran-damina, dia misy karazana sazy telo samy hafa - fizarana an-tapitrisany, sazy an-tranomaizina, ary famonoana tanteraka.
Partial Match - dia mijoro amin'ny sazy an-tànana manery ny tranokala na ny bilaogy hidina ny valin'ny fikarohana. Matetika dia mitranga izany rehefa hitan'i Google ny hetsika hafahafa amin'ny karazana spammy tena izy, izay mifandray amin'ny fanodikodinam-bava amin'ny teny maro sy ny keyphrases - raha tokony hampiakatra ny fifamoivoizana bebe kokoa, ary tsy manome ny sandany marina amin'ny votoatin'ny pejy.
Fanamelohana ho an'ny tranonkala - izay mety ho fiantraikany goavana amin'ny vokatra faran'izay mafy. Miaraka amin'ny fahafaha-manatsara ny fampihenana ny antsasaky ny fifamoivoizan'ny tranonkala, ity karazana sazy ity dia matetika ampiharina amin'ny fampiasana ny backlinks Gray-Hat, toy ny vatofantsika miafina, tsy misy dikany na tsy mbola feno tanteraka ny votoaty madinika toy ny pharmacy, fanitsakitsaham-bady na filokana. Raha toa ianao ka mifandray amin'ny mpivarotra rohy malemy iray izay mampanantena ny hiverenana any amin'ny tranokalan'ny PR ho an'ny tranonkalanao - saika tsy misy fotoana - ny fotoana ahazoanao hatahotra. Satria mety hanangana saina mena amin'ny Google ianao ary hangataka sazy.
Famaranana tanteraka - miteny ho azy. Midika izany fa ny fanajanonana ny fivarotana fivarotana azo tsapain-tanana dia mety hahatonga ny zavatra ho ratsy kokoa. Ny tiako holazaina dia ireo trangan-javatra mampalahelo indrindra raha ny ahiahin'ny tranonkala na blaoginao amin'ny fanararaotam-pahefana miaraka amin'ireo trosan-tsolika na rafitra ara-barotra ataon'ireo rindrambaiko - ary tsy misy afa-tsy ny fikarohana. Amin'ny ankapobeny, ny vokatra mampalahelo toy izany dia manosika ny rohy tsy misy vidiny amin'ny fivarotana "orinasa", ary ireo "mpanjifa" Source .